Maamul looga dhawaaqay Kismaayo iyo xiisad ka jirta magaalada
Magaalada Kismaayo ayaa xalay ilaa saaka waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan ciidamada huwanta ah iyo kuwa Kenya kadib markii magaalada looga dhawaaqay maamul KMG ah oo uu madax ka yahay Axmed Madoobe.
8 xubnood oo uu ka mid yahay Axmed Madoobe oo ah Gudoomiyaha gobolada jubooyinka ee Maamulka KMG ah ayaa looga dhawaaqay magaalada kadib ay soo gabagaboobeen kulamo ka soconaya Kismaayo oo u dhaxeeyay Odayaasha deegaanka iyo Saraakiisha.
Ciidamada dowladda, Ururka Raaskambooni iyo ciidamada Kenya oo wato gaadiid dagaal aadna u hubaysan ayaa lagu arkayaa magaalada kuwaasi oo doonaya inay weeraro ku qaadaan deegaanada kale oo ay Al Shabaab kaga sugan yihiin Jubooyinka sida Jamaame iyo Jilib.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in ay suura gal tahay in saacad kasta ay weeraro qaadaan ciidamada huwanta iyo kuwa Kenya , dhinaca kale Shabaab ayaa dhankooda wado dhaqdhaqaaq ciidan oo ay suurta gal tahay inay dagaalamaan.
Kismaayo iyo gobolada Jubooyinka ayaa waxaa isha lagu hayaa isbadalka ka dhici doona mar hadii Shabaab ay isaga baxeen inta badan gobolka.